အမယ်မင်းရယ်တဲ့ အဖြစ်ဆိုးလိုက်ဒါ…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » အမယ်မင်းရယ်တဲ့ အဖြစ်ဆိုးလိုက်ဒါ….
Posted by myat pearl phyu on Feb 17, 2014 in My Dear Diary | 18 comments
ဒီပိုစ့်ကို မရေးချင်ဖူးးးး မရေးချင်ပါဖူးးး… လုံးဝကို မရေးချင်ပါဖူးးးး…
ခုတော့.. ခုတော့ ရေးရတော့မယ်…
မဆက်ဆံချင်တဲ့ အရာတွေ မဖြစ်စေချင်တဲ့ အရာတွေနဲ့မှ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ဖြစ်ရ ကြုံရ ဆုံရ တတ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲ …
တလောကမှ ဖုန်းမှာ PUK code lock ကျတဲ့အကြောင်း စာလေးရေးပြီးတင်မိပါတယ်…
ခုတော့ ဖုန်း (Handset) ပါ လုံးလုံး ပျောက်သွားပါပြီကောလားကွယ် …
အချိန်က ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက် ညနေဆည်းဆာချိန်ခါဝယ် …
ဘယ်မှာပျောက်တာလဲဆိုရင် ရန်ကုန်မြို့ ရဲ့  အသည်းနှလုံး ရင်ခုန်သံတို့ဆုံဆည်းရာ ချစ်သူတို့ ပျော်ရွှင်ရာ လူကြီး လူငယ်အရွယ်စုံ သွားလာကြတဲ့ အချစ်ကမ္ဘာ အင်းယားကန်ဘောင်ကြီးမှာပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်….
ကိုယ်ဒွေသွားတာကတော့ သူငယ်ချင်းတစ်သိုက်နဲ့ပါ … မုန့်တွေစား ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ကြနဲ့ ဈေးဝယ်ပြီးပြန်လာကြတာဆိုတော့လည်း အထုပ်တွေကများ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်တော့ ကိုယ်စီ ကိုယ်စီ အတွဲလေးတွေ အတွဲလေးဆိုတာ ချစ်ကြည်နူးနေကြတာပေါ့လေ…ကန်ဘောင်က ထိုင်ခုံဆိုတာ ဘယ်အချိန်က ဘယ်လိုအတွဲတွေ နေရာယူထားကြလဲမသိပါဘူး..အဲ့မှာ ခုံနေရာရဖို့ဆိုတာ တကယ့်ကို ရှားပါးဖြစ်စဉ်ထဲက မို့လို့ထင်ပါတယ်…
ကန်ဘောင်တစ်ခွင်မှာ ရှိသမျှ နေရာ မြက်ခင်းပြင်ဆိုလည်းမြက်ခင်းမို့ ဘောင်ပေါ်ဆိုလည်း ဘောင်ပေါ်မို့ တွေ့ရာနေရာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျော်ပျော်ပါး ထိုင်ကြ စကားပြောကြသူများ နဲ့ အဖွဲ့လိုက်အုပ်စုလိုက် လာကြ ဂစ်တာတွေတီး သီချင်းဆိုနေကြတဲ့သူများရော.. ပျော်ပွဲစားသဖွယ် ၀ိုင်းဖွဲ့စားသောက်နေသူများစွာနဲ့ အလွန့်အလွန်စည်ကားသာယာတဲ့ ရန်ကုန်ရဲ့ နှလုံးသားတို့ ဆုံရာ အင်းယားကန်ဘောင်ပါပဲလေ …
ခုလို လူစုံ စရိုက်စုံ လူများပြားစည်ကားလှတဲ့ တကယ့်အချက်အချာ နေရာကျမှ ကိုယ်ကလည်း သူငယ်ချင်းတစ်သိုက်နဲ့ ပျော်ပါးနေလိုက်တာ ကိုယ့်ဖုန်းမေ့ကျှန်ခဲ့မှန်းတောင် မသိလိုက်ရအောင် ပေါ့ဆလွန်းလှလို့ ကိုယ့်ခေါင်းကို ၁၀ပေါင်တူနဲ့သာ ထုရိုက်ချင်စရာကောင်းအောင် အမြင်ကတ်မိပါတော့တယ်…
အမယ်မင်း ဒေါ် MPP ရယ် …ခုတော့ဖြင့် Samsung Galaxy Grand (Nov; ကမှ ၀ယ်ထားတဲ့ ဖုန်းအသစ်) ကလေးဟာဆိုရင်ဖြင့် အလှူပေးလိုက်ရပါပေါ့လား …
ဟန်းဆက်ပျောက်ရင်ဖြင့် လိုင်းကတ်ပျောက်ထပ်လျှောက်ဖို့ MPT ကိုပြေးရဦးမယ်…ရုံးကလည်း ခွင့်ထပ်ယူရဦးမယ် ..ဟန်းဆက်လည်း ထပ်ဝယ်ရဦးမယ်…ဘယ်လောက်များ မေ့လျော့သလဲဆို ဖုန်းမပါလာတာကို Taxi ပေါ်ကအဆင်း အိမ်နားအရောက် ဖုန်းဆက်မယ်ဆိုပြီး ဖုန်းရှာကာမှ ဖုန်းမပါလာမှန်းသိပါတော့တယ်…ပြန်ခါနီး အထုပ်တွေသိမ်းကြ ပြန်စီကြနဲ့မှာ ဖုန်းလေးဘေးခဏချထားတုန်း ဘေးအိတ်လေးထဲပြန်ထည့်ဖို့ မေ့သွားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်…
ကဲ..ပျောက်ပြီဆိုတာသိလိုက်ရတော့ ပြန်ရှာပေါ့ ကန်ဘောင်ဆီကိုကွယ် … ဘယ်တွေ့တော့မလဲ …တွေ့တဲ့သူက ကောက်သွားပြီပေါ့ … (ရတာနဲတယ်တဲ့ … S2 တို့ Note2တို့ မဟုတ်လို့ နာသကွာလို့ တွေးမလား မသိပါဘူး ) …အဲ့ဒီမှာကို ရေဗူးခွံတွေ အမှိုက်ကောက်တဲ့သူတွေနဲ့ အာလူးကြော်လို မုန့်လိုက်ရောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ …လူကလည်းများတယ်လေ… ဖုန်းလေးကျှန်ခဲ့တာကို တွေ့တဲ့လူက ယူသွားမှာပေါ့..
ခုခေတ်မှာ Sim card တွေကပေါ်လာပြီလေ.. handset ကိုပဲ တစ်ချို့တွေ ကားပေါ်တွေ Shopping center တွေမှာ ခါးပိုက်နှိုက်တဲ့သူက နှိုက်နေကြတာတဲ့…ကိုယ်လည်း အဲ့ဒီလို မေ့တတ်လွန်းတဲ့သူမို့ သတိထားပါတယ် သူများကိုတောင် အမြဲသတိပေးနေကြ မုန့်ဆိုင်မှာ မုန့်စားပြီး ပြန်မယ်ဆို ကားပေါ်က ဆင်းပြီဆိုရင် သူငယ်ချင်းတွေကို ကိုယ်ကပဲ …ဟဲ့ ဟဲ့ နင်တို့ ပစ္စည်းတွေ မေ့ကျှန်မယ်နော်… သေချာစစ်ဦးဆိုပြီး …ခုတော့ ကိုယ်ပါသွားပြီ…
လုံခြုံရေးကိုရှာပြီး ပြောခဲ့ပါသေးတယ်… ပြန်ရရင်တော့ သူတို့က ဆက်သွယ်ပေးပါမယ်ပေါ့…အဲ့လိုပဲတဲ့ ကန်ဘောင်မှာ အတွဲလေးတွေ ချစ်ကြည်နူးနေတုန်း ဘေးချထားတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်တို့ ဖုန်းတို့ဆိုတာ ခါးပိုက်နှိုက်ယူသွားခံရတယ်ဆိုပဲ … အဲ့ဒိနေ့က ကိုယ့်ထက်ဆိုးတဲ့သူတစ်ယောက်က ပိုက်ဆံအိတ်ကော ဖုန်းကော အလစ်သုတ်ခံလိုက်ရတယ်တဲ့ သူတို့က ကိုယ့်ကိုပြောပြတယ်..လူစုံတဲ့ နေရာဆိုတော့လည်း လူဆိုး လူကောင်းဆိုတာ ခွဲခြားစရာ သူ့မှာ ဂျို ပါတာမှ မဟုတ်ပဲလေ ….ကိုယ်ဖြစ် ကိုယ်ခံရတော့မှာပေါ့…
အော် …သတိ သတိ တကယ့်ကို သတိတစ်ချက်ပါပဲ … မီးလောင်တာတွေ အခြေခံဖြစ်စဉ်ကြည့်ရင်လည်း မီးပိတ်ဖို့ မေ့သွားတာတို့ …သတိမေ့လျော့လို့ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့လေးတွေကနေ ပြဿ နာ အကြီးကြီးတွေ ဖြစ်ကြရတာပဲမဟုတ်လား …
ခုတော့ အလုပ်ထပ်ရှုပ်ရဦးမယ်… ဒေါ် MPP ဘောစိဆိုတော့ ၀ယ်လိုက်ပါဦး နောက်ဖုန်းတစ်လုံး (ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲ ပြန် ရွဲ့လိုက်သည်)
ကျောင်းတတ်တုန်းကလည်း ဖြုန်းတာဆိုတာ လက်မှာ ၀တ်ထားတဲ့ ရွှေဟန်းချိန်းကျပျောက်ဖူးသည်..(ဒါလည်း ပြန်မရခဲ့ ..) ။ နားကွင်းတစ်ဖက်ပျောက်သည်။ နားဆွဲတွေ ပြုတ်ထွက်သည် (ရွှေတွေချည်းပဲ ကြွားဒါမီဟုတ် )။ ချိုင့် တို့ ထီးတို့ ဆိုတာ ပျောက်လိုက်ရင် အသစ်လေးတွေမှ ဘက်စ်ကားပေါ်မေ့ကျှန်ခဲ့သည်..ဈေးဝယ်ရင်း ဈေးဆိုင်မှာကျှန်ခဲ့သည်…
ဒီလောက်မေ့တတ်နေတာ..ဘယ်လိုများ အလုပ်ကြီးကိုင်ကြီး လုပ်မလဲမသိ…
စာရင်းကိုင်များ လုပ်ခဲ့မိရင် စာရင်းကွာလို့ ရတာနဲနဲ ရောရတာနဲ့ ထမင်းငတ်နိုင်သည်…
လူတိုင်းမှာကောင်းတာရော မကောင်းသောအကျင့်လေးတွေပါ ကိုယ်စီ ကိုယ်စီ ရှိတတ်ကြပါသည်… ကိုယ့်ရဲ့  အားနည်းချက်လေးကို သတိလေးထားလို့ ပိုမိုဂရုစိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများများနဲ့ နောင်တရစရာနည်းပါးသွားနိုင်မည်လို့ ဆင်ခြင်သုံးသပ်မိပါသည်…ခုတော့ ပစ္စည်း သင်္ခါရ ၊ လူ သင်္ခါရ တရားနဲ့ဖြေရုံမှတစ်ပါး ရှေ့လူ အဖြစ်မျိုး နောက်လူသင်ခန်းစာယူနိုင်ဖို့အရေး ရင်နာနာနဲ့ ရေးသားတင်ပြရပါတယ်..
နောင်များ ဒီလိုအဖြစ်မျိုး မဖြစ်အောင် ဆင်ခြင်ရုံမှတစ်ပါး ……
ကတ်ပျောက်လုပ်ဖို့ အရေး MPT သို့ မနှေး ပြေးရပါဦးမယ်…
စာအရေးကောင်းတာ လေး သတိပြုမိနေပြီ
ကောင်းဒယ်လား … အင်း ကောင်းပါဒယ် (စိတ်ညစ်ဖို့ …)
အော်ဖြစ်ရလေခြင်း။ MPT မသွားနဲ့ပေါ့။ ဖုန်းဆိုင်တခုကနေပဲ ကဒ်ပြောက်လျှောက်ခိုင်းလိုက်ပေါ့။ အချိန်ကုန် လူပင်ပန်းသက်သာတယ်။ ငွေတော့နဲနဲကုန်သပေါ့လေ။ ၂၀၀၀၀ ပေးရတယ်။
ဆိုင်ဒွေက တစ်ပါတ်တောင် ချိန်းဒယ်… ပဆံ လည်း ပိုတောင်းဒယ် …
မီးက အဲ့ဒါ ရုံးပဲ တွားလိုက်ဒါ…
တက်ကစီ အသွား/အပြန် – ငါးထောင်ကျပ်
လျှောက်လွှာမှာ ပျောက်တဲ့နေ့ရယ် ၊ နောက်ဆုံး ကိုယ်ခေါ်ခဲ့တယ် Last call နံပါတ် ၃ ခု ဖြည့်ပေးရဒယ်….
မနက် ၉ နာရီခွဲ မှာ စလျှောက်တာ ပထမဆုံးအသုတ်မှာ ပါတာတောင် ၁၂ ကျော်မှ ကတ်အသစ်ပြန်ရတယ်ချင်..
ကိုယ့်နောက်မှာ လူဒွေ လူဒွေ တစ်ဖွဲဖွဲရောက်လာတာ .. ကတ်ပျက်တွေ ကတ်ပျောက်ဒွေ ဆိုတာ MPT ရုံးအတွင်းပြင်ကို စည်ကားတိုးကျိတ်နေဒါပါပဲလား…
ခေါင်းတွေမူး မြောင်းတွေတူးပီး .. (အဲ ..ရှုဆေးလေး ရှုပီး)
ထိုင်စောင့်ရတဲ့ ၃ နာရီ လောက်နီးပါးမှာ တရားတောင်ပေါက်ချင်ဒယ်…
တော်ဘီ…..MPP ကိုစာရင်းထဲကထုတ်လိုက်ဘီ….MPP ကိုဆက်ကိုင်ရင်မွဲလိမ့်မယ်
da’s gud idea
ဖုန်း ပျောက်ကြောင်းပြောမှ ..
ဟိုရက်ပိုင်းက ခရီးသွားတော့ ..
ပြင်ဦးလွင်မှာ တည်းခိုနေတုန်း ဟိုတယ် အပြင်ထွက် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဘက် သွားလိုက်တာ ..
လမ်းဘေးမှာ ဖုန်းလေး တစ်လုံး ကောက်ရတယ် …
ဒါနဲ့ ဘောင်းဘီ အိတ်ကပ်ထဲ ထိုးထည့်ပြီး လက်ဖက်ရည် သောက်တယ် ..
ဟိုတယ် ပြန်ရောက်တော့ ဖုန်းမြည်လာတယ် …
ဒါနဲ့ပဲ ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ် …
ဖုန်းပိုင်ရှင် ကောင်မလေး ကတော့ အတော် ၀မ်းသာလို့ သွားလေရဲ့ …
ကိုယ်လည်းပဲ မုဒိတာ ပွားရတာပေါ့လေ …
အစ ကောက်ရကာစတုန်းကတော့ .. ယူလိုက်မလို့ပဲ ..
သူ့ဖုန်းက touch screen အတုဂျီးမို့ ပြန်ပေးလိုက်တာ ..
ဟွန်း.. ဟွန်း.. နာ ခုမှ သိတာပါလား…
ဖုန်းပျောက်မှာ သိပ်ကြောက်တာ.. နောက်တစ်လုံး မဝယ်နိုင်သေးဘူး.. ဟင့်.
လက်ထဲမယ် စာချုပ်လည်း မရှိဘူး.. ဖုန်း မကိုင်တော့ရင် ကောင်းမားလို့..
မမွန်မွန် မကြောက်ပါနဲ့ …
သတိလွတ်သွားရင်တော့ ဖုန်းမှ ဟုတ်ပု .. အကုန်အရေးကြီးတာကြီးပဲ..
ဖုန်းမကိုင်တော့ရင် နာ့ကို လက်ဆောင်ပေးပါရား ….ေိခိ
ကုသိုလ် ရပါဒယ်… ကောင်းလေစွ (၂ ကြိမ်)
ဖုန်းပျောက်တာလေးကို ရေးသွားလိုက်တာ ဖတ်ကောင်းတဲ့စာလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖြစ်လို့…ချီးကျူးပါ၏
ဦးမိုက် ကျေးဂျူး စာလာဖတ်ရို့ ..
ခုမှ အူးကြောင် မန့်ကို တွေ့မိလို့ပါ..။
ကာရံညီအောင် ကဗျာလုပ်မန့်တတ်တဲ့စတိုလ်ကလည်း အူးကြောင် စတိုလ်လို့ ဆိုရမှာပေါ့နော်။
ဘာပြောမှန်း နားမလည်လည်း ၀င်မန့်သွားတာပဲ ကျေးဂျူးတင်ပါတယ်ဂျာ..။